अर्थ/व्यापार Archives | Page2of 92 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - राधेमाई मन्दिरमा सरसफाई 'फोटो फिचर' - page 2
बीरगंज । हिन्दू युवा परिसद पर्साले आज बीरगंजको प्रसिद्ध राधेमाई मन्दिर बृहत सरसफाई गरेको छ। बीरगंज महानगरपालिका बड़ा न.१३ राधेमाईमा रहेको मन्दिरलाई हिन्दू परिसद नेपालका अगुवानेता,कार्यकर्ता,नेपाल प्रहरी,मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले सरसफाई गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
देशका मुख्य नदीमा शनिबार बहाब उल्लेख्य बढ्ने अनुमान !
काठमाडौं । बाढी पूर्वाअनुमान महाशाखाले कन्काई, कोसी, कमला, बागमती, नारायणी, पश्चिम राप्ति, बबई, कर्णाली र महाकाली सबै मुख्य नदीहरुमा बहाब बढ्दो क्रममा हुने अनुमान गरेको छ । असार २९ गते शुक्रबार बिहान अनुमान गरेको सुचना अनुसार कन्काई, कोसी नदी देखि बबई,कर्णाली लगायत महाकालीमा बहाब बढ्दो तर खतराको तह भन्दा तलै हुने अनुमान गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
मानव संशाधन विकासमा जापानको २७ करोड अनुदान
काठमाडौं । जापान सरकारले मानव संशाधन विकासका लागि रु २७ करोड ४१ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । सार्वजनिक सेवामा दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले जापानका नाम चलेका विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका निम्ति छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन उक्त अनुदान उपयोग गरिनेछ । अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, औद्योगिक विकास तथा कानूनी नीतिजस्ता विषयमा निजामती सेवाका कर्मचारीले छात्रवृत्ति पाउने छन् । विगत तीन वर्षदेखि जापानले उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । २० जना नेपाली विद्यार्थीको तेस्रो खेप जापानी विश्वविद्यालयमा अध्ययनका निम्ति चयन भइसकेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
त्रिशूली र देवीघाट हाइड्रोको उत्पादन बन्द
नुवाकोट । त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रमा मंगलबार अपराह्न लागेको आगोले पु¥याएको क्षतिको मर्मत गर्न अझै एक साता लाग्ने भएको छ । जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई टान्सफर्मरसम्म पु¥याउन प्रयोग गरिएको विद्युतीय तारमा जडान गरिएको बसबार र तीनवटा ब्रेकरमा आगोले क्षति पु¥याएपछि २१ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र र १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन बन्द छ ।	थप पढ्नुहोस्
कार्गो विमान चढेर भद्र र रुपसी चीन पुगे
काठमाडौं । विश्वमै दुर्लभ मानिने एक सिँगे गैडाको एक जोडी बिहीवार चीन प्रस्थान गरेको छ ।चीनबाट आएको विशेष विमान‘युनिट अफ कार्गो एअरलाइन्स’बाटभद्र र रुपसी नाम दिइएका गैंडा चीन पठाइएको हो । गैंडा बोकेको विमान त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पौने ५ बजे नेपालबाट चीनका लागि उडेको थियो । करिब पाँच घण्टाको उडानपछि ती गैँडा चीनको गोन्जाओ पुगेका छन् । गैंडालाई गोन्जाओकै च्याम्बुलुङ सफारी पार्कमा राखिने छ । करिब पाँच घण्टाको उडानका लागि गैँडालाई चाहिने खाना, पानी जहाजमै व्यवस्था गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
ह्याङलुङ केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव १ रेक्टरस्केलको भूकम्प
बाजुरा । शुक्रबार बिहान बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ । बिहान ८ बजेर ५८ मिनेटमा बाजुराको ह्याङलुङ आसपासको केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव १ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्प मापन केन्द्रले विसं २०७२ बैसाख १२ गते शनिबार गएको भूकम्पको पराकम्पन रहेको बताएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
डोजरले बाटो खन्दा तीन घर पुरिए, दुई घर ढल्के, १२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा !
चौतारा, २९ असार । अविरल वर्षाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–४ स्थित खनालथोकमा–१२ घर उच्च जोखिममा छन् । बस्तीको तलमाथि दुवैतिरबाट सडक खनिएका कारण माथिबाट माटो झरेको र तलबाट माटो बग्ने गरेको हुँदा ती घर उच्च जोखिममा परेको प्रहरीचौकी भोटेचौरले जनाएको छ । भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माण गर्ने सामान लान डोजरद्वारा सडक खनेको हुँदा तीन घर आधा पुरिएको दुई घर आधा ढल्केको तथा सात घरसहित १२ घर उच्च जोखिममा परेका छन् । स्थानीयवासी रामचन्द्र खनाललगायत १२ घर परिवारले सामान सारिसकेको र उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सिन्धुपाल्चोकमा भएको जीप दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु !
मेलम्ची, २९ असार । सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–४, सल्लेडाँडामा लु १ ख ९९९ नंंको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा दुई महिलासहित ५ जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार राती भएको जीप दुर्घटनामा ३ जनाको घटनास्थलमै र २ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा अरु ८ जना घाइते भएका छन् । उनीहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेका छ । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका तिपेनीबाट सोही गाउँपालिकाको मानेखर्कतर्फ जाँदै गरेको बोलेरो जीपमा १५ जना सवार रहेको बताइएको छ । दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन ।	थप पढ्नुहोस्
ललितपुर । नेपालको प्रमुख बाली धानमा विभिन्न किसिमका रोगका संक्रमणले किसान हैरान छन् । धानबालीमा मुख्य गरेर मरुवा, फेद कुहिने रोग, खैरोथोप्ला र पातेफेद डढुवाको प्रभाव देखिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० अन्तर्गतको बाली रोग विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ । बालीमा ब्याक्टेरिया ढुसी र जुकाको आक्रमणले रोग लाग्ने निर्देशनालयमा कार्यरत वैज्ञानिक चेतना मानन्धरले बताउनुभयो । रोगको फैलावट, प्रकोप र तिनले पु¥याउने नोक्सानी फरक छन् । खैरो थोप्ले, कालोपोके र दागी दाना समस्या धानबालीमा सबै क्षेत्रमा पाइन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
डोल्पा । ठूलीभेरी नगरपालिकाको बजेट रु २८ करोड ९१ लख ८५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हाम्रो लगानी कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, वातारवरण र पूर्वाधार, ठूलीभेरी नगरपालिकाको समृद्धिको मूल आधार’ नाराका साथ ठूलीभेरी नगरपालिका जुफालको दोस्रो नगर सभाले सो बजेट प्रस्ताव गरेको हो । नगर सभाले आन्तरिक सडक विस्तार र व्यावसायिक प्राङ्गारिक कृषि खेतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्